Redmi Note 4G (Single/ Dual SIM) ကို Gapps & Myanmar Font installer bat ( No Need ROOT ) - Myanmar Spirit
Home / Software / Redmi Note 4G (Single/ Dual SIM) ကို Gapps & Myanmar Font installer bat ( No Need ROOT )
Redmi Note 4G (Single/ Dual SIM) ကို Gapps & Myanmar Font installer bat ( No Need ROOT )
2:14:00 am tuntin
ဒီ Tools လေးက ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ Redmi Note 4G (Single/ Dual SIM) နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် Root Access လုံးဝမလိုပဲ Google Apps (Google Play Services, Google Play Store, Google Service Framework, Google Partner Setup, Google Login Service) တွေနဲ့ Zawgyi font ကို 100% နေရာတိုင်းမှန်အောင် 1 Click နဲ့ ထည့်နိုင်တဲ့ Tools လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
‪‎အသုံးပြုလို့ရသည့်‬ Devices များ
‪‎Redmi‬ Note 4G Single SIM (dior)
Redmi Note 4G Dual SIM (gucci)
Tools အား အောက်ဖော်ပြပါ Links မှတဆင့် Download ရယူပါ။ မိမိအသုံးပြုလိုသော PC တွင် မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထားနိုင်ပါသည်။ မိမိ အသုံးပြုမည့် PC နှင့် Mobile Devices သည် Driver Detected ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Mobile Devices ၏ Developer Options တွင် Fastboot mode နှင့် USB Debugging ကို On ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် Devices နှင့် PC ကို USB Cable ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ Tools ကို Run ပါ။ မိမိရဲ့ Devices သည် Single SIM ဖြစ်ပါက Option ‘s’ ကိုရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ။ Dual SIM ဖြစ်ပါက Option ‘d’ ကိုရွေးပြီး Enter ခေါက်ပါ။
ထို့နောက် သူ့ဘာသာ အလုပ်ဆက်လုပ်သွားပါမယ်။ ထိုင်ကြည့်ပေးရုံပါပဲ။ ထို့နောက် Auto Reboot ဖြစ်ပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ Zawgyi 100% မှန်ကန်နေပြီး Google Apps များ System Apps အဖြစ်သွင်းနေပြီးသား ဖြစ်နေပြီပေါ့။
(( ‪#‎DISCLAIMER‬: USE OUR TOOLS AT YOUR OWN RISK ))
I am KG (Myanmar KG Song) သူငယ်တန်းတေးသီချင်းများ ...
[Full Packages]Google Apps Installer for Mi 5/ Mi ...
၂၀၁၅ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း အွန်လိုင...
Computer ရဲ့ RAM ပျက်နေကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်လဲ. ???...
Clash of clans Version : 8.332.2 latest (May 24)
KINGROOT APPLICATION (APK) ALL VERSION FREE DOWNLO...
Download iOS 9.3.2 Final For iPhone And iPad [IPSW...
Xiaomi China ROM တွေအတွက် Gapps installer apk
Yangon Buses apk
Yangon Trains apk
Facebook အကောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အရိုးရှင်းဆုံး အလ...
G730-U00 MIUI ROM + CWM
ဘာသာစကားပေါင်း (၉၀)ကျော်ကို အပြန်အလှန် အသံသွင်းပြီ...
Japan စာလေ့လာနေသူများအတွက် apk ကောင်းလေးတွေ
အသုံးတည့် iPhone လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုနည်းစ...
Redmi Note 4G (Single/ Dual SIM) ကို Gapps & Myanm...
iOS အတွက် အခမဲ့ unlimited VPN app ကို Opera ဖြန့်ခ...
THE SIMS3100MB + SD DATA
ဖုန်းထဲ့မှာ PDF စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် - Adob...
♪ ANDROID DEVICE များတွင် “ UNFORTUNATELY APP HAS ...
Samsung S6 / Note5EFS Backup Restore Tool
Samsung phone တွေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် wifi conne...
Incoming Call Lock apk
Myanmar MeMe Creator apk
ဆရာတော်ကြီး( ၇ )ပါးရဲ့ တရားစု စကားစု သြဝါဒများကိုေ...
SD Cardအတုဟုတ် မဟုတ်သိရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းနှစ်ခု